အရာခပ်သိမ်း၏အကောင်းဆုံးသောအရှည်ကဘာလဲ။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 5, 2014 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 4, 2014 Douglas Karr
တွစ်တာရဲ့စံပြအရေအတွက်ကဘာလဲ။ Facebook ပို့စ်လား။ ဂူဂဲလ်ပို့စ်လား။ စာပိုဒ်တစ်ခုလား။ ဒိုမိန်းလား။ hashtag လား။ ဘာသာရပ်လိုင်း? ခေါင်းစဉ် tag လား။ ဘလော့ခေါင်းစဉ်တွင်စကားလုံးမည်မျှရှိသနည်း။ LinkedIn ပို့စ်တွင်စကားလုံးမည်မျှရှိသနည်း။ blog post လား။ အကောင်းဆုံး Youtube ဗီဒီယိုဘယ်လောက်ကြာသင့်လဲ။ ဒါမှမဟုတ် podcast လား။ Ted ဆွေးနွေးချက်လား။ Slideshare တင်ဆက်မှု? Buffer ၏ပြောကြားချက်အရ၎င်းတို့သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သည့်တွေ့ရှိချက်များဖြစ်သည် shared အများဆုံး။
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် tweet - အက္ခရာ ၇၁ မှ ၁၀၀ အထိ
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် Facebook က post ကို - ဇာတ်ကောင် ၄၀
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် Google+ ခေါင်းစဉ် - စာလုံးရေ ၆၀ အမြင့်ဆုံး
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအကျယ် စာပိုဒ် - 40 မှ 55 ဇာတ်ကောင်
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် domain name ကို - ဇာတ်ကောင် ၄၀
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် နံပါတ်အစားအသုံးပြုသောဟက်ရှ်သင်္ကေတ - ဇာတ်ကောင် ၄၀
တစ်ခု၏အကောင်းဆုံးအရှည် အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်း - 28 မှ 39 ဇာတ်ကောင်
တစ်ခု၏အကောင်းဆုံးအရှည် SEO ခေါင်းစဉ် tag - ဇာတ်ကောင် ၄၀
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် blog ခေါင်းစဉ် - စာလုံး ၆ လုံး
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် LinkedIn ပို့စ် - စာလုံး ၆ လုံး
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် ဘလော့ Post ကို - စာလုံး ၆ လုံး
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် youtube video -3မိနစ်
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် podcast တခုကို - 22 မိနစ်
တင်ဆက်မှု၏အကောင်းဆုံးအရှည် - 18 မိနစ်
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရှည် SlideShare - ဆလိုက် ၆၁ ခု
တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးအရွယ်အစား Pinterest ပုံရိပ် - 735px အားဖြင့် 1102px
အလုံးစုံ နှင့် buffer ဒေတာတစ်တန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီ။ ငါဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဒီလိုယေဘူယျချဉ်းကပ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ငါအဆိုးမြင်ငါဖြစ်၏, ငါခြုံငုံအပြုအမူတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ကောင်းတစ် ဦး ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ထင်ပေမယ့်, ငါ desktop ပေါ်မှာ cheat စာရွက်ထုတ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သင်၏ဒေတာကိုဖန်တီးရန်စတင် ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကစျေးကွက်သမားတွေကိုသူတို့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အရာကနေလမ်းလွဲသွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာကိုယ့်ဖောက်သည်တွေအတွက်အကြောင်းအရာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းကြောင့်အငြင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာတယ်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအောက်ရှိဒေတာများသည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ၊ အပြောင်းအလဲများ၊ ဘာသာရပ်၏ရှုပ်ထွေးမှု၊ လုပ်ငန်း၊ ပရိသတ်နှင့် ၄ င်းတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုသို့မဟုတ်ပညာရေး၊ ကိရိယာ၊ သို့မဟုတ်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေရန်၊ ပညာပေးရန်၊ ပရိသတ်ရဲ့အပြုအမူကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအခြားအချက်များတစ်သန်း။
လူတွေဟာငါတို့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွန်အကျွံသုံးလွန်းတဲ့အတွက်ပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့အခါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသည်ယခုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမျှသာရှိသေးပြီး၎င်းနောက်ကွယ်မှကြီးထွားလာသောစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ငါတို့ Podcast ကိုစဖွင့်တုန်းကငါမှတ်မိတာကမိနစ် ၃၀ ကျော်သွားပြီလို့လူတွေကပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာနားထောင်သံ ၃ သန်းရှိတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါဟာတခြားသူတွေလို ၆ စက္ကန့်ကြာတဲ့ဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတစ်နာရီကျော်အကြာမှာငါဝယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ။
ဒီမှာကျွန်တော်အကြံဥာဏ်ပါ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စကားလုံးအရေအတွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မထားဘူးသောခေါင်းစဉ်ရေးပါ။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုရေးပါ၊ သင်ရေးချင်တဲ့အရာနဲ့သင်စာဖတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ သင်နှင့်အဆင်ပြေပြီးသင်ဂုဏ်ယူမိသည့်ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးပြီးကြည့်ရှုသူများအားသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်တွန်းအားပေးသည်။ တိုတောင်းတာကိုစစ်ဆေးပြီးတုန့်ပြန်မှုကိုတိုင်းတာပါ။ ကြာကြာစစ်ဆေးပါ၊ တုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောပရိသတ်များထံရောက်ရှိရန်တိုတိုနှင့်ရှည်လျားသောပေါင်းစပ်မှုများရှိရန်သင်အရှည်ကိုပင်ပြောင်းလဲလိုပေမည်။
Tags: Blog ခေါင်းစဉ်အရှည်Blog post အရှည်ဒိုမိန်းအရှည်Facebook post အရှည်google + post အရှည်hashtag အရှည်တစ် ဦး tweet ၏စံပြအရှည်အရှည်ပို့စ်တင်အရှည်အရှည်ဆုံးလိပ်စာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Podcastအပိုဒ်အရှည်slideshare တင်ဆက်မှုအရှည်ဘာသာရပ်လိုင်းအရှည်Ted ဆွေးနွေးမှုအရှည်ခေါင်းစဉ် tag အရှည်tweet အရှည်youtube ဗီဒီယိုအရှည်
ငါး - နောက်လာမည့်အဖြစ်အပျက်တွင်အသုံးပြုသူ၏ပါဝင်မှုကိုဖမ်းယူတိုင်းတာပါ